Ikhamera ye-Qomo QD3900H2 Desktop Document
Ikhamera yombhalo weQomo QD3900H2 inamandla okusondeza okungu-10x kanye nenzwa yesithombe ewuchwepheshe ukuze ilethe imibala egqamile ngokuchazwa okuphezulu, izinqumo eziphumayo ze-Full HD 1080p namafreyimu angu-30 ngomzuzwana. Isekela okokufaka/okuphumayo kwe-HDMI, i-QD3900H2 ihambisana nemishini eminingi yomsindo/ividiyo enencazelo ephezulu. Bese inkumbulo yangaphakathi igcina izithombe ezifika ku-512MB futhi inwebeka nge-USB flash drive/ikhadi le-SD. Ukuthinta okukodwa komsindo/ividiyo okurekhodiwe izethulo ngaphandle kwesidingo se-PC. Idizayini ye-backlight eyakhelwe ngaphakathi ifinyelela izimfuneko zokubonisa izithombe eziningi. Idizayini yezibani eziseceleni ezilungisekayo ezimbili ivimbela ukubonakaliswa. Ukushuna okuzenzakalelayo kwenkinobho eyodwa kunikeza ikhwalithi yesithombe ephelele ngaso sonke isikhathi. Imodi eyingqayizivele yeprojektha yokuxhuma i-LCD noma i-DLP projector ukunciphisa ukuphazamiseka okubangelwa izinhlobo ezahlukene zobuchwepheshe beprojektha eziletha ikhwalithi yesithombe ehamba phambili.
Ikhamera yedokhumenti yedeskithophu ye-QOMO QD3900H2 isekela ukulungiswa okugcwele kwe-1080p ku-30 ​​fps. I-zoom engu-10x ivumela abasebenzisi ukuthi bagxile ezicini ezibaluleke kakhulu zokwethulwa kwabo. I-QD3900H2 ifaka inzwa yokucabanga yekhwalithi ephezulu ye-Qomo efaka ukuncishiswa komsindo kanye nokukhiqizwa kombala okucacile kwe-HD.
Le khamera yombhalo wesikhungo semidiya nayo inesiteji esikhanyisa emuva se-A4, esifanela kahle incwadi yombhalo noma idokhumenti yephepha, isitoreji sesithombe sangaphakathi esingu-512MB kanye nesofthiwe ye-Image/Video Capture. Ungakwazi futhi ukwandisa imemori ngokusebenzisa i-USB thumb drive noma ikhadi le-SD.
Ikhamera yedokhumenti yeDeskithophu ye-QD3900H2 ifaka uhlu olugcwele lwezinkinobho zokulawula kusisekelo sekhamera. Lokhu kubenza bafinyeleleke kalula ngaphandle kokuphazamisa isethulo sakho.
Esinye sezici ezinhle kakhulu zekhamera ye-QD3900H2 Desktop Document amandla ayo okusebenza ngaphandle kwekhompyutha. Ifaka kokubili okukhiphayo kwe-VGA kanye ne-HDMI, ingakhipha ngokuqondile kuprojektha noma isibonisi
Ama-sidelamps e-Qomo dual LED avimbela noma yikuphi ukukhanya noma ukukhanya.
Inkinobho enothile kumarimothi isiza isilawuli-kude esilula. Ku-interface eseceleni ongabeka isilawuli kude ngaphandle kokulahlekelwa
Olandelayo: I-Qomo desktop Doc Cam enosayizi wokudubula we-A4
Okwedlule: QD3900H1 Ikhamera yedokhumenti yombhede oflethisiwe
Ikhamera yedokhumenti yedeskithophu
Ikhamera ye-Hd Document
Ikhamera yedokhumenti yedeskithophu ye-QD3900H2